China High quality China factory Supply Small Excavator Slewing Ring ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta |Wanda
Ụlọ ọrụ China dị elu na-eweta obere mgbanaka mgbanaka mgbanaka
N'ezie, ọ dị mkpa ka edochie ihe na-egbu egbu nke obere olulu ahụ kwa afọ abụọ ruo atọ.Ọtụtụ ihe kpatara ya bụ mgbanaka mgbanaka eze dara.Nnukwu radius nke gyration, ibu dị elu na-adịte aka, na oke ibu ọrụ, na-eme ka mgbanaka nha nha daa.Nsogbu ịdị mma na-egbu egbu na-ebi obere akụkụ.
XUZHOU WANDA SLEWING BEARING CO., LTD ga-amasị gị inye gị ọnụ ahịa kacha ala maka mgbake ~
N'ezie, ọ dị mkpa ka edochie ihe na-egbu egbu nke obere olulu ahụ kwa afọ abụọ ruo atọ.Ọtụtụ ihe kpatara ya bụ mgbanaka mgbanaka eze dara.Nnukwu radius nke gyration, ibu dị elu na-adịte aka, na oke ibu ọrụ, na-eme ka mgbanaka nha nha daa.Nkemgbanaka igbu egbunsogbu àgwà na-ebi obere akụkụ.
A na-eji slewing rotary bearings n'ọtụtụ ebe n'ime igwe na-ewu ụlọ, ọ bụ ebe mbụ na ebe a na-ejikarị egbu egbu rotary bearings, ọ bụghị naanị na enwere ike iji ya mee ihe maka igwu ala, kamakwa enwere ike iji ya maka igwe na-akpụ akpụ, igwe na-ekpochapụ, stackers na reclaimers, graders. rola, compactors ike, igwe egwu egwu nkume, nkụnye eji isi mee okporo ụzọ na ihe ndị ọzọ.
Maka onye na-egwupụta ihe, ọtụtụ ndị na-eji ihe eji egbu egbu n'ime gia emenyụ.Isi ike nke ezé emenyụrịrị bụ 50-60HRC.
Biko hụ tebụl nkọwapụta egbugbere ọnụ agbakwunyere ka ịhọrọ ụdị dabara adaba nke ịchọrọ maka onye na-egwupụta ihe gị.
Xuzhou wanda slewing bearing Co., Ltd bụ ọkachamara na mmepụta dịgasị iche ichemgbanaka igbu egbuna-ebu maka obere ndị na-egwupụta ihe.A na-emenyụ ihe eji egbu egbu, eze na-esikwa ike.Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ka ị nweta nkọwa ndị ọzọ.
Nke gara aga: ahịrị atọ rola slewing bear
Osote: xzwd OEM kacha mma ịgbanye bọọlụ maka kreen
ihe gwuputa ihe
ọnụ ahịa na-egbu egbu
XZWD obere dayameta otu ahịrị bọọlụ na-egbu b...
XZWD nnukwu dayameta otu ahịrị bọọlụ polymer slewi ...
XZWD OEM otu ahịrị bọọlụ ziri ezi na-egbu egbu
XZWD Hot ire OEM otu ahịrị bọọlụ anọ ihe c ...